Fariinta Maareeyaha | Golis Telecom Somalia
Xilka Maareeyaha Guud 100 maalmood ka dib
Allaa Mahad leh, naxariis badan iyo nabadgelyo nebigeenii Muxamad ahaa korkiisa ha ahaato. Waxay aheyd June 11, 2012 markii aan la wareegay xilka maareeyaha Guud ee shirkadda Golis, taasoo maanta laga joogo muddo saddex bilood iyo siyaado ah. Waxaa xusid mudan in xilkan ma-gacaabistiisu aysan ku iman dalab iyo doonis aniga xa-geyga ka timid, ee ay ku timid garasho xubnaha sare ee aasaasayaasha shirkadda oo uu ka mid yahay maareeyihii hore ee shirkadda, Mudane Aadam Shiikhdoon Cali , oo u arkay in aan qabto xilkaas, iyagoo aaminsanaa in aan shirkadda ku soo kordhin karo khibrad iyo aqoon dan u ah shirkadda, shaqaalaheeda iyo bulshada ay u adeegtaba. Waxaan aqbaley xilkaas anigoo ka duulaya hadalkii Ne-biga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ku yiri Saxaabigii Cabdiraxmaan bin Samra, alle ha ka raali noqdee, oo ahaa “ Madaxnimo ha weydiisan, oo haddaad raadiso waa laysukiin deynayaa, hadii lagula soo doontana waa laguugu kaal-meynayaa” (Bukhaari & muslim) .
Marka laga reebo xilka maamul ee aan hadda hayo, Shirkadda Golis waxaan shaqo la bilaabey sanadkii 2006, iyadoo aan u ahaa la-taliyaha xagga xisaabaadka iyo Hanti-dhowrka madaxa-banaan (External Auditor), waxaana si toos ah ula shaqeynayey maamulka iyo guddiga asaasayaasha shirkadda, anigoo mas’uul ka ahaa hubinta dhabnimada iyo jiritaanka hantida shirkadda iyo adkeynta qaab-maaliyadeedkeeda, anigoo aan shaqaale toos ah u aheyn shirkadda ee kula shaqeynayey qaab heshiis-shaqo kaliya ah.
Mudadii saddexda bilood aheyd ee aan shirkadda ka ahaa Maareeyaha Guud waxaan ka bartey wax aanan ka baran ama ka ogeyn lixdii sanno ee aan shirkadda u ahaa hanti-dhowraha madaxa-banaan (External Auditor), marka laga eego xagga baaxada shaqada shirkadda, hawlaha maali-yadda, maamulka iyo maareynta, duruufaha ku xeeran shirkadda iyo weliba xiriirka shirkaddu la leedahay bul-shada guud ahaan iyo gaar ahaanba. Shirkadda Golis waa shaqaaleeyaha ugu weyn geyiga ay ka jirto, iyaddoo ay kor u dhaafeen shaqaalaha joogtada ah iyo inta sida aan joogtada aheyn ula shaqeeya ilaa 1000 shaqaale, taasoo muujineysa dowrka muhiimka ah ee shirkaddu ku leedahay kor u qaadidda nolosha bulshadda iyo ka qeyb-qaadashada kordhinta iyo kobcinta dhaqaale ee bulshada.
Shirkadda Golis oo ah runtii shirkad caan ka ah Soomaaliya waxay ka mid tahay shirkadaha ugu mudan dhinaca adeegyada isgaarsiinta, hadey noqon laheyd adeegga Mobile-ka, Landline-ka, internet-ka iyo weliba adeega Sahal oo laf-dhabar u ah dhaqdhaqaaqa maali-yadeed ee waddanka iyo sahlidda wax-bixinta iyo wax-kala-gadashada heer qof ahaaneed iyo mid ganacsiyeedba.
Waxay kaloo shirkadda Golis bixisaa adeegyo kale oo la-gama maarmaan u ah xiriirka dadka sida adeegyada Kumee, Way-Kan, Ku-naso, Xog-maal, iyo kuwo kale oo la mid ah, kuwaasoo kor u qaadaya qiimaha uu leeyahay mobile-ka Golis.
Intaas waxaa u sii dheer adeega Korontada oo ay gaarsiiso inta badan xarumaha ay ka hawlgasho shirkadda ee ku baahsan gobollada, degmooyinka iyo tuulooyinka, waxaana xusid mudan in meeshii Golis joogto korontana joogto inta badan.
Runtii way yar tahay ama maba jirto meel Golis koronto geysay oo dhaqaale ahaan is-bixisa, culeyska badankiisuna wuxuu ku dhacaa shirkadda iyada oo aysan jirin cid gaar ah oo hawshaas ka caawisa ama ka kaalmeysa.
100-kii maalmood ee ugu horeeyey waxaan xoogga saarey in aan wax ku soo kordhiyo qaab dhismeedka maamul ee shirkadda oo aan fududeeyo in laga faa’iidey-sto hantida ballaaran ee shirkadda ee dhinaca shaqaalaha, taasoo la oran karo way adag tahay in la helo shirkad Golis oo kale ah dhinaca aqoonta, kartida iyo hufnaanta shaqaalaheeda, waxaanan xooga saarey in aan shaqada qeybiyo, mas’uuliyaat-kana qeexo, taasoo runtii fududey-sey hab-sami u socodkii hawsha baaxadda leh ee maamul ee shirkadda. Waxaa la oran karaa runtii shaqaalaha shirkaddu waxay muujiyeen hanaan-wanaag wadashaqey-need, haddey noqon lahaayeen xubnaha sare ee maa-mulka iyo shaqaalahaba, waxaana kordhey xiriirkii tooska ahaa ee shaqaalaha dhexdooda, iyo isku kalsoonidoodii qof ahaan iyo guud ahaanba, waxaana Alle ugu mahadi-nayaa in uu i waafajiyey qaabkaas, miraheediina waxay ka muuqata shirkadda dhexdeeda iyo aragtida ay ka qa-baan qeybaha kala duwan ee bulshadda ay shirkaddu u adeegto.
Waxaa xusid mudan kalsoonida bulshada ee shirkadda iyo adeegyadeeda iyo sida ay dadweynuhu u aaminsan yihiin in shirkadda Golis ugu dhowdahay dhinac kasta, noloshooduna ugu tiirsan tahay adeegyadeeda kala duwan ee soo kordhaya, qeyb weyna ay shirkaddu ka tahay ho-rumarka dhaqan-dhaqaale ee bulshadda. Adeegyada cusub ee shirkadda waxaa ka mid ah adeegii KU-NASO oo la ballaariyey iyo adeega GPRS-ka oo u sahlaya macmiilka in uu ku xirnaado internetka, isagoo heli kara ama furan kara ama ka jawaabi kara dhammaan fariimaha emailka loogu soo diro meel kasta oo uu joogo, isagoo si sahlan u geli kara mareegaha Internet-ka (websites), addeegaas oo si dhamaystiran uga dhaqan galay dhammaan gobol-lada, degmooyinka iyo goob kasta oo ay joogto shirkadda, waxaana shirkadda soo gaaray dhambaallo farabadan oo tahniyad iyo bogaadin xambaarsan. Waxaan mahad gaara u celinayaa dhammaan macaamiisha shirkadda, waxaana u ballanqaadeynaa in aan dhegeysan doono taladooda iyo fakradohooda si aan u horumarino isgaarsiinta geyigeena oo runtii laf-dhabar u ah horumarka bulshada.
Waxaan kaloo ammaan iyo bogaadinba u soo jeedinayaa shaqaalaha shirkadda meel kasta oo ay joogaan, waxaana Alle uga baryayaa in uu ugu kaalmeeyo sidii ay u gudan lahaayeen xilka shirkadda iyo ummadaba ay u hayaan sida amaanada iyo hufnaantaba leh.